Xiddigii hore ee xulka qaranka Faransiiska Jean-Pierre Adams ayaa weli ku jira koomo uu galay… – Hagaag.com
Jean-Pierre Adams, xiddigii hore ee xulka qaranka Faransiiska iyo kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain, ayaa lagu sameeyay qalliin yar oo jilibka ahaa sanadkii 1982, laakiin khalad caafimaad oo khatar ah awgii ayaa ku dhacay miyir beel 39 sano ka hor.
Jariidada Ingriiska ee “THE SUN” waxay dib uxasuusatay qisadii naxdinta lahayd ee Adams, kaasi oo qaatay irbid xanuun baabi’iso ah oo loogu talo galay qaliinka ka hor, taasoo gelisay miyir beel dheer, waxayna nolosha qoyskiisa iyo xaaskiisa Bernadette u rogtay dhibaato joogto ah.
Adams wuxuu ku dhashay caasimada Senegal ee Dakar sanadii 1948, wuxuuna u guuray Faransiiska isagoo toban jir ah wuxuuna bilaabay xirfaddiisa kubada cagta isagoo ka ciyaarayey dhinaca difaaca kooxda Nimes todobaatameeyadii, wuxuuna u horseeday inay u tartanto hanashada Horyaalka Faransiiska 1972-1973. xilli, ay ku dhameysatay kaalinta labaad, waxayna u soo baxday semi-finalka Koobka French Cup xilligii dahabiga ahaa ee kooxda.
Adams wacdarihii cajiibka ahaa ee uu muujiyey ayaa u horseeday inuu ku biiro xulka qaranka Faransiiska 1972, sidoo kale wuxuu ka soo muuqday heer caalami ah intii lagu jiray 22 kulan oo uu la ciyaaray kooxda diiqa, magaciisana waxaa la xiriiriyay halyeeygii kubada cagta Faransiiska ee Marius Tresor ilaa 1976.
Wuxuu u dhaqaaqay kooxda Nice sanadkii 1973 wuxuuna la joogay 5 sano, mudadaas oo uu ciyaaray 126 kulan, wuxuu dhaliyay 15 gool, inkasta oo uu ka ciyaarayay safka difaaca.
Adams oo 29 jir ahaa wuxuu qandaraas weyn la saxiixday Paris Saint-Germain, oo ku matalay labo sano, wuxuu saftay 42 kulan, wuxuuna dhaliyay labo gool, wuxuuna magiciisa ku aasaasay inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoydii ugu muhiimsaneyd tobankii sano ee ugu horreysay ee naadiga Paris. Adams wuxuu amaan ka helay asxaabtiisa caalamiga ah, oo uu ka mid yahay ciyaaryahanka khadka dhexe ee caanka ah Henry Michel, oo ku tilmaamay inuu yahay “awood dabiici ah oo go’aan leh.”
Adams wuxuu xirfadiisa kubada cagta ku soo gabagabeeyay da’da 33 sano iyo weeraryahanka reer Poland Joseph Klose, aabaha halyeeyga Jarmalka Miroslav, halkaasoo ay kuwada ciyaareen mid ka mid ah kooxaha heerka labaad, dhaawac jilibka ka soo gaaray awgii, wuxuu galay Isbitaalka Edouard Herriot ee kuyaala magaalada Lyon sanadkii 1982 halkaasi oo lagu sameeyo qalliinada joogtada ah oo lafilayay inuu Isbitaalka ka baxo dhowr maalmood kadib.
Laakiin arrimuhu waxay udhaceen si naxdin leh markii dhakhtarka suuxiyaha uu sameeyay khalad dhimasho u dhow isla markaana uu siiyay qiyaas khaldan ee qalliinka kahor, sidaas darteed horyaalkii Isboortiga ee xoogga badnaa wuxuu ku dhacay bronchospasm, taas oo horseeday oxygen-ka inuu gaari waayo madaxiisa, halkaasina uu ku galay kooma joogto ah ilaa maanta oo uu gaadhay da’da qiyaastii 73 Sano jir.
Sagaashameeyadii, maxkamad Faransiis ah ayaa labada dhakhtar ee suuxiyey ku xukuntay bil xarig ah oo xabsi ah, marka lagu daro ganaax lacageed oo culus.
In kasta oo ku dhowaad 40 sano ay ka soo wareegtay markii uu miyir beelka ku dhacay, xaaskiisa Bernadette kama quusan daryeelkiisa iyo daryeelida baahidiisa gurigooda oo u dhow Nimes, koonfurta Faransiiska.
Adams oo miyir beel ah, lama xiriiri karo qofna xitaa ma muujin karo dareenkiisa, laakiin wali wuu awoodaa inuu neefsado oo qufaco asagoo caawimaad ka helin qalabka caafimaadka, laakiin wuxuu ubaahan yahay daryeel joogto ah, wuxuuna ku seexdaa sariir dhinaca caafimaadka loogu talagalay oo khuseysa xaaladiisa.
Bernadette ayaa tiri, “Dadka qaar waxay ku yiraahdaan Facebook-ga in laga jaro aaladaha … laakiin kuma xirna aaladaha caafimaadka. Ma lihi geesinimo aan ku joojiyo jirkiisa in la siiyo cunno iyo biyo,” iyadoo carabka ku adkeysay inay tahay mid ka dhan ah euthanasia oo ah dhimashada raxmada leh oo diiday inuu ka tago ninkeeda.
Laakiin mowqifka xaaskiisa ayaan ku raacsaneyn ra’yiga saaxiibkiis ee difaaca kooxdii hore ee Faransiiska Tresor, kaasoo diiday inuu soo booqdo tan iyo markii uu koomaha galay.
“Xitaa haddii Jean-Pierre soo kaco, cidna ma aqoonsan doono. Miyuu u qalmaa ku noolaanshaha sidan. Haddii wax la mid ahi igu dhacaan, waxaan ka codsaday xaaskeyga inaysan i ilaalin,” ayuu yiri Trezor.